अन्तिम टेस्टमा जडेजाको शानदार प्रदर्शन, भारत २९२ रनमा अलआउट ! - अन्तिम टेस्टमा जडेजाको शानदार प्रदर्शन, भारत २९२ रनमा अलआउट !
अन्तिम टेस्टमा जडेजाको शानदार प्रदर्शन, भारत २९२ रनमा अलआउट !
२०७५, २४ भदौ, 05:42:20 PM
लण्डन । इंग्ल्याण्डसँगको पाँच खेलको क्रिकेट श्रृंखला गुमाइसकेको भारतका लागि रवीन्द्र जडेजाले अन्तिम टेस्टमा शानदार प्रदर्शन गरेका छन । उनले अन्तिम टेस्टमै मौका पाएका हुन । यसअघि चार वटा टेस्टमा उनी बेन्चमै सिमित भएका थिए ।
अन्तिम टेस्टको पहिलो पालीमा इंग्ल्याण्डलाई ३ सय ३२ रनमा अलआउट गर्न ४ विकेट लिएका जडेजाले व्याटिंगमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन । निकै नै खराब शुरुवात गरेको भारतका लागि जडेजाले ८६ रन बनाएका हुन ।
१ सय ५६ बल खेलेका उनले ११ चौका र १ छक्का हाने । भारत १ सय ६० रनमै हुँदा क्रिजमा आएका जडेजाले २ सय ९२ रनको अवस्थामा पुर्याएका थिए । अन्तिम समयसम्म क्रिजमा टिकेका उनले इंग्लिस बलरलाई राम्रै चुनौति दिएका थिए । जडेजापछि कप्तान विराट कोहलीले ४९ रन बनाएका थिए ।
कोहली र जडेजासँगै हनुमा बिहारीले ५६ रन बनाएका थिए । इंग्ल्याण्डका जेम्स एण्डरसन, बेन स्टोक्स र मोइन अलिले समान दुई दुई विकेट लिएका थिए ।
जडेजाको शानदार प्रदर्शनपछि पनि भारत पहिलो पालीमा ४१ रनले पछि परेको छ । आइतबार नै आफ्नो दोश्रो पाली थालेको इंग्ल्याण्डले दुई विकेट गुमाएर १ सय भन्दा बढी रन बनाएको छ ।